मधेसी समस्या र राज्यको पुनर्संरचना – हृदयेश त्रिपाठी | Madhesi - United We Stand
मधेसी समस्या र राज्यको पुनर्संरचना – हृदयेश त्रिपाठी
September 21, 2006 at 10:20 pm Leaveacomment
मधेसी समस्या र राज्यको पुनर्संरचना
अश्वं नैव गजं नैव सिहं नैव च नैवच !
अजापुत्र बलिंदधात् देवी दुर्वल घातकः ।।
-अर्थात् घोडा होइन, हात्ती वा सिंह पनि होइन, अपितु बाख्रीको पाठोको बलि लिने देवी पनि दुर्बलको नै घात गर्छिन् । शाही सत्ताले पनि सशस्त्र माओवादीभन्दा पनि निहत्था राजनीतिक दलहरूको बलि लिन आतुर छ ।)
विचार र आम जनताबाट सुसज्जित दल, युद्धविराम गरेका विद्राेहीहरू, स्वतन्त्र प्रेस, मानवअधिकारवादी, विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, मजदुर, युद्धरत विद्रोहीभन्दा
बढी खतरनाक ठान्ने शाही सत्ताको चरित्र र बनावटको गहिराइ नाप्न अब जरुरी भएको छ ।
वस्तुतः आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा जटिल, जोखिमपूर्ण तर अवसरयुक्त कालखण्डबाट नेपाल गुजि्ररहेको छ । तसर्थ वर्तमान संकट एकातर्फ चुनौती हो भने अर्कोतर्फ अवसर पनि हो । यो संकटको मूल जड नै कथित एकीकरणपश्चात् हालसम्म विद्यमान राज्यको बनावट, चरित्र र स्वरूप हो । जसको बनावट एकाङ्गी, चरित्र विभेदकारी र दमनकारी छ भने स्वरूप अपाङ्ग र एकात्मक । त्यसैले नेपालको भौगोलिक एकीकरणमात्र भएको छ । भावनात्मक एकीकरण हुनसकेको छैन । त्यसैले मधेसी समुदाय, आदिवासी/जनजाति, दलित र महिलाहरूमा देश हाम्रो हो, तर राज्य हाम्रो होइन भन्ने भावना प्रबल छ । राज्य एउटा समुदायको, केही जाति विशेषको कब्जामा छ । राज्यका अङ्गहरूमा अरू समुदायको उपस्थिति प्रायः शून्य वा नगण्य रहेको छ । यी वञ्चित मधेसी समुदाय, दलित, आदिवासी/जनजाति र महिलाहरूले आफ्नो सहभागितापूर्ण भूमिका प्राप्त गर्नका लागि अरूभन्दा बढी प्रजातन्त्रको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । तिनका दमित आवाज प्रजातन्त्रमा मात्रै संगठित हुन्ासक्छ ।
मधेसी समुदायका लागि पञ्चायती व्यवस्थाको कल्पनासम्म पनि एउटा भयावह प्रेतजस्तै लाग्छ । एक भाषा एक भेषको नारामा स्वतन्त्रताविहीन निर्दलीयताको अवधिमा भएका कुकृत्यहरू गनिसक्नु छैनन् । मधेसी आम समुदायभित्र त्यसको त्रास आजसम्म पनि व्याप्त छ । राष्ट्रिय एकताको नाममा विकास क्ष्ाेत्र र अञ्चल तथा जिल्लाहरूको विभाजन र बनावट, तराईको जंगल विनाश गरी सुकुम्वासीको नाममा एउटै समुदाय विशेषलाई मधेसमा गराइएको बसोवास, विकराल नागरिक समस्यामा मधेसी समुदायलाई अल्झाइरहने राजकीय षड्यन्त्र, मधेसी जनता र भारतविरुद्ध चलाइएको महेन्द्रवादी छद्म राष्ट्रवादका नाराको उत्कर्ष थियो त्यो । मानव र नागरिक स्वतन्त्रताको पूर्णतः समाप्ति, मधेसी जनताप्रति पूर्णतः अविश्वास गर्दै सेनाबाट वञ्चित गराइराख्ने शासकीय षड्यन्त्र आदिलाई चिर्न र समाप्त गर्न पनि मधेसी जनतालाई संसदीय लोकतन्त्रको थप आवश्यकता छ । यद्यपि संसदीय कालको १२/१४ वर्षमा पनि मधेसको समस्या समाधान भएनन् । तथापि मधेसी जनताले आफ्नो समस्या पहिचान गरेर संगठित हुने अवसर प्रजातान्त्रिक अवधिमा नै पाएका हुन् । विभिन्न शान्तिपूर्ण संघर्ष यस अवधिमा भए । मधेसको समस्या राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा यसै कालमा स्थापित भएको हो । संसद्द्वारा पारित शाही सत्ताको एकाङ्गी स्वरूप र बनावटलाई राष्ट्रिय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने संकल्प प्रस्तावको बेवास्ता अथवा नागरिकतासम्बन्धी संविधान संशोधनको प्रस्ताव विफल पार्ने कार्य यसै कालमा भएका उदाहरण हुन् । ०५९ असोज १८ गतेपश्चात् राजाद्वारा नियुक्त हरेक अवैधानिक सरकार र ०६१ माघ १९ पश्चात्को राजा स्वयम्को अध्यक्ष्ातामा रहेको अवैधानिक सरकारको यस नीतिप्रतिको निरन्तरताले के राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको वास्तविक प्रतीक हो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न जन्माएको छ । नेपाल यस्तो राष्ट्र हो, जहाँ अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्दै आएको छ । र आफ्नो शासनलाई न्यायपूर्ण सावित गर्न हमेसा तल्लिन रहन्छ । तर यी प्रश्नहरू प्रजातान्त्रिक वातावरणमा मात्र उजागर गर्न सकिन्छ । विद्यमान विविधताको प्रतिनिधित्व स्वशासनले मात्र गर्न सक्छ । जसले जनताको एकतालाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्छ ।
आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘सभ्यताहरू बीचको द्वन्द्व र विश्व व्यवस्थाको पुनसर्ंरचना’ मा अमेरिकी विद्वान् सैमुयल पी हन्टिङ्गटनले लेख्ोका छन्, ‘सोभियत संघ र साम्यवादको समाप्तिपश्चात् शीतयुद्ध पछाडिको विश्वमा जनताबीच सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विभेद वैचारिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक होइन, अपितु सांस्कृतिक हो । …जनताले राजनीतिको प्रयोग आफ्नो स्वार्थ बढाउनमात्र गर्दैनन्, आफ्नो पहिचानलाई पनि परिभाषित गर्ने गर्छन् ।’ अर्थात् संस्कृति र पहिचान मानव समुदायले त्याग्नै नसक्ने र पृथक संस्कृति र पहिचान अँगाल्नै नसक्ने विषयवस्तु हुन् । कथंकदाचित् लाद्न खोजियो भने स्वाभाविक द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ र अनन्तसम्म लम्मिन्छ । ऐतिहासिक कालदेखि नै यहाँ एउटा संस्कृति र पहिचान अर्काे संस्कृति र पहिचानमाथि बलपूर्वक राज्यकै संरक्ष्ाणमा लाद्ने अभियान सुनियोजित रूपले चलाइएको छ । यस कुकृत्यको चिरफार पनि प्रजातन्त्रमा मात्र हुनसक्छ ।
विद्यमान विभेदकारी राज्य संरचनाको स्थापना राजसंस्थाले गरेको हो । एउटै समुदायको केही जातिविशेष यसै संरचनामा आरक्ष्ाित भएका हुन्, फलस्वरूप यो संरचनाले सम्पूर्ण समुदाय, जातजातिलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको हो । तसर्थ आजको मूल समस्याको समाधान राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना हो । बारम्बार विफल एकीकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गरी संघात्मक स्वरूप अनुरूपको राज्य संरचनाको स्थापना गर्नु दीर्घकालीन रूपले द्वन्द्वको समाधान गर्नु हो । त्यस्तै सेनाको स्वरूपलाई राष्ट्रिय सेनाको रूपमा रूपान्तरण गर्नु आजको अर्काे चुनौती हो । तर यो रूपान्तरणको प्रक्रिया कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने सवाल अहम् छ ?
यसको सबैभन्दा उत्तम र लोकतान्त्रिक विधि प्रत्यक्ष बालिक मताधिकारको आधारमा निर्वाचित जनताको संस्था संविधानसभा हो । संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना गर्ने सामथ्र्य राख्छ । त्यसले जनतामा रहेको वास्तविक सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता फर्काउने तागत राख्छ । किनकि राजकीयसत्ता बेगरको जनता सार्वभौम हुन सक्दैन । र सेना जसको नियन्त्रणमा हुन्छ, राजकीयसत्ता त्यसैको हातमा कैद हुन्छ, सार्वभौमसत्ता फगत नारामा केन्दि्रत हुन पुग्छ ।
माओवादी विद्राेहीले आफ्नो सामाजिक आधार र समर्थन विस्तार गर्न ९ वटा विभिन्न जातीय मोर्चाको निर्माण गरेको छ । त्यसले स्वशासनको भावना जागृति गराई पिछडिएको समाजलाई सशस्त्र संघर्षमा उतारेको सबैलाई थाहा छ । यसले समाजका ती अङ्गका जनतामा एउटा भोक जगाइसकेको छ । केही प्राप्त नगरी यो भोक अब शान्त हुने कल्पना गर्न सकिँदैन ।
यसको शान्तिपूर्ण अवतरण र समाधान संविधानसभाबाट मात्र सम्भव छ । विद्यमान राज्य संरचनालाई यथावत राखेर गरिने कुनै पनि सहमति अल्पकालीनमात्र सावित हुनेछ ।
मधेसको अवस्था कुरूप र भेदभावग्रस्त हुनुमा राज्यको विद्यमान संरचना र शासकहरूको अपराधपूर्ण षड्यन्त्र जिम्मेवार छ । साथै केही हदसम्म मधेसी नेताहरू पनि यसनिम्ति जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । जनतामा अभूतपूर्व चेतना वृद्धि भए पनि नेताहरूमा एकताको अभाव, लघुताभाष, आत्मबलको अभाव, निजी स्वार्थपूर्ति खातिर तत्तत् मालिकको चाकरी गर्ने मनोवृत्ति, शासकीय षड्यन्त्रमा फँसिहाल्ने बेजोड प्रवृत्ति बाधकका रूपमा देखिएका छन् ।
कृत्रिम नेतृत्व र कृत्रिम व्यक्तित्व निर्माण गर्ने प्रयत्न धेरै वर्षदेखि हुँदै आएको छ । तसर्थ यी विकृति र प्रवृत्तिहरूलाई पराजित गर्दै शान्तिपूर्ण संघर्षको माध्यमद्वारा संविधानसभाको निर्माण गरी सोमार्फत संघात्मक शासन प्रणाली स्थापित गरेरमात्र समृद्ध, समुन्नत र सामाजिक न्यायमा आधारित नेपाल निर्माणबाहेक अर्काे विकल्प नरहेको मधेसी नेताले बुझ्नैपर्छ । इतिहासको यस चुनौतीलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरी घोडा, हात्ती र सिंहलाई यथास्थानमा राखी, बाख्रीका सन्तानको मात्र बलि दिई रमाउने स्थितिको अन्त्य हुनु आवश्यकमात्र होइन, जरुरी पनि छ ।
पहाडियामा शासकीय र मधेशीहरुमा दास मनोवृत्ति छ: मात्रृका यादव	चित्रलेखा यादव